N'ogbe Thermal Break okpukpu abụọ Glazed Aluminom Casement Window China Deshion Manufacturer and Supplier |Deshion
Nri ọkụ ọkụ okpukpu abụọ nwere glazed Aluminom Casement Window China Deshion
Ihe Frame: 6063-T5 aluminum
Alu.Ọkpụrụkpụ: 1.4mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm
Ụdị iko: Igwe ọkụ otu/okpukpu abụọ
Ọkpụrụkpụ iko: 5mm 6mm, 8mm & 10mm + 12mm
Ụzọ mepere emepe: RAL mkpuchi ntụ ntụ ma ọ bụ anodized
Usoro: DS95 Series Aluminom Casement Ohere
Profaịlụ: 6063-T5 okpomọkụ agbaji profaịlụ aluminum
Glass: Igo na-atụgharị uche, iko LOWE, iko laminated, iko tinted, Ka ahaziri ya
Nhọrọ: 0.8mm igwe anaghị agba nchara ofufe ihuenyo
Ọkpụrụkpụ iko: 5MM+27A+5MM/A ga-ahazi ya
SPEC: Ọkpụrụkpụ Aluminium 1.8/2.0MM Omimi Omimi 95 MM
Akụrụngwa: German Brand/Akara China ama ama
Window oghere na-eme ka ikuku dị n'etiti ime ụlọ na ọdịdị maka ikuku ime ụlọ dị ọhụrụ, ebe ewezuga ohere nke mmiri ozuzo n'ime ụlọ ahụ.
Akụrụngwa njikọ na njikwa lever gburugburu sash windo nwere ike rụọ ọrụ ụdị ọrụ niile n'ime ụlọ.N'ihi na a na-edobe eriri mpio kpamkpam na windo windo gburugburu mgbe ọ na-emechi, ya mere nchekwa ya na mgbochi izu ohi dị mma.
Ike dị elu / ezigbo akara nke ọma nguzogide corrosion / FireRated / Okpomọkụmkpuchi mkpuchi / SoundInsulationinsulation / SoundInsulation
Ike dị elu, mgbe iko a na-agbaji, agbala ọkụ, emela ndị mmadụ nsogbu.
Ọdịmma dị mma na enweghị mkpọtụ -
mgbe windo mechiri.
Ogologo ndụ ọrụ, elu dị larịị na
aka dị mma,90° na-emeghe nwayọ
Mkpuchi ntụ ntụ
Ihe nkiri ọkpụrụkpụ karịa 40 μm, elu were were, yi ngwaahịa dị iche iche n'ibu arụmọrụ imeghari ụdị ọ bụla nke architectural style.All agba dị.
Nkà na ụzụ ọhụrụ na-emecha na-etolite ọdịdị dị ka ezigbo osisi.Na afọ 15 mma mmesi obi ike, corrosion-eguzogide inogide, na-enwu ihe ịchọ mma.Dị na ụdị osisi ụkpụrụ.Aka aka ma ọ bụ ibufe ihe nkiri dị ma dị.Ahaziri anabata.
Ihe mkpuchi Uniform, mkpuchi fluorocarbon dị mma nke nwere ọmarịcha ọla, agba na-egbuke egbuke na mmetụta akụkụ atọ doro anya.20 afọ mma nkwa.
Oxidation film ọkpụrụkpụ bụ karịa 13 μm, ọbụna agba, na-enweghị n'ibu ahịrị, corrosion-eguzogide inogide, enwu na decorative.Available dị iche iche na agba dị ka metal ọlaọcha, champeenu, ọchịchịrị ọla kọpa, nwa na otu agba na matt mmetụta.
Ohere ime ụlọ
Ohere na-amị amị
Ime ụlọ anwụ
Ụdị imeghe windo
Window mpụta nke French mepere emepe
Window mkpuchi na-apụ apụ
Window mkpuchi na-atụgharị
Window okpukpu abụọ
Tụgharịa ma tụgharịa windo
N'elu kpọgidere + windo mpụpụ
Window na-amị amị
Window nfe n'ime
Window mkpuchi mkpuchi elu kwụgburu
A: Ee, Ụlọ ọrụ anyị na-ekpuchi mpaghara nke 20000㎡ ma nwee ndị ọrụ 300+.
Ajụjụ: Gịnị bụ isi ngwaahịa gị?
A: Anyị nwere ike ịnye mgbidi mkpuchi mkpuchi iko, ọnụ ụzọ na sistemu windo (gụnyere profaịlụ, ngwaike, ngwa, iko), Ọdịdị igwe, Railings.
Ajụjụ: Kedu ka m ga-esi nweta ọnụahịa gị?
A: Ọnụ ahịa a dabere na ihe onye zụrụ ya chọrọ, yabụ biko nye ozi dị n'okpuru ebe a iji nyere anyị aka ịdee ọnụ ahịa gị.
1) Ụlọ ahịa ịbịaru / oge windo iji gosi akụkụ windo, ọnụọgụ na ụdị;
2) Agba agba ; Ụdị iko na ọkpụrụkpụ (otu ma ọ bụ abụọ ma ọ bụ laminated ma ọ bụ ndị ọzọ) na agba (doro anya, tinted, reflective, Low-E ma ọ bụ ndị ọzọ, na Argon ma ọ bụ na-enweghị).
A: 30-45 ụbọchị mgbe nkwụnye ego na eserese kwadoro
Ajụjụ: Gịnị bụ akwụkwọ ikike gị?Gịnị ka anyị na-eme ma ọ bụrụ na e nwee nsogbu?
A: Enyere akwụkwọ ikike ịdị mma afọ 10, gụnyere etiti na-adịghị emebi ma ọ bụ ihichapụ, ngwaike na ngwa na-arụ ọrụ nke ọma n'okpuru ọrụ ziri ezi.
Ajụjụ: Kedu ụdị ọrụ ị ga-enye?
A: Anyị nwere ike ịnye injinia yana ọrụ nlekọta iji duzie ntinye nke ngwaahịa anyị
Ajụjụ: Ngwaahịa gị agbagoro asambodo? Aha na-aga ebe a.
A: Ee, ngwaahịa anyị bụ CE asambodo, anyị ga-eme ka ngwaahịa anyị nwale ma nweta asambodo ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Nke gara aga: Ọnụ ụzọ mpịachi nke Aluminium Aluminom & Accordion Door Glass
Osote: Ewubere ụgbọ okporo ígwè ndị China Omuma arụrụ ígwè Balcony Railing & Railing Mpụga
Aluminom Glass Facade Systems
103/112 Series Custom Mere Design Thermal ezumike...
China Aluminom Frame Casement Door System Doub ...
Deshion Aluminom mbanye ọnụ ụzọ iko mpịachi Me...
Aluminom Frame Glass sliding door Office Partit...
ahaziri Aluminom Windows Aluminom slide W...